Akwụkwọ ikike - Beijing Zohonice Beauty Equipment Co., Ltd.
1. Ọrụ Mmezi
(1) nkwa: Site na 1 afọ site na ụbọchị ị zụrụ ngwaahịa ahụ, ọ bụrụ na enwere mmejọ ọ bụla, anyị ga-enye ọrụ mmezi n'efu.
(2) Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla mgbe ị na-eji ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị na ekwentị, Faksị, Skype, WhatsApp, Viber ma ọ bụ e-mail ma anyị ga-aza n'ime otu elekere ma dozie nsogbu gị ozugbo enwere ike.
(3) Anyị na-elekọta àgwà nke ngwaahịa anyị n'okpuru iji ya. Ọ bụrụ na nnabata ndabere, anyị na-enye mmezi n'efu. Mgbe akwụkwọ ikike oge, anyị na-ana-eri na-eri price maka akụkụ ahụ mapụtara. Nka na ụzụ nduzi bụ n'efu maka ndụ niile.
(1) Nka na ụzụ ọzụzụ:
A ga-enwe akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ ma ọ bụ vidiyo nke ga - enyere gị aka ịmụ igwe, otu esi etinye, otu esi arụ ọrụ, otu esi edozi igwe, yana ndị ọzọ, a ga - enwe ndị na - ere ahịa na - ere ahịa na - enye ọrụ elekere 24 awa.
(2) Ọzụzụ ọgwụgwọ:
E guzobere ogige ọzụzụ mara mma nke Zohonice maka ndị ahịa na-eleta. Nwere ike ịnweta ntuziaka ọzụzụ ọzụzụ ahụike sitere n'aka Dọkịta ma ọ bụ ndị ọchọmma anyị, ị nwekwara ike were ọzụzụ a site na E-mail, ekwentị na ngwaọrụ ịntanetị, wdg.